Sida lagu Helo Spotify Music Google Music Library
> Resource > Android > Sidee si ay u gudbiyaan Spotify Music Google Music Library
Waa maxay sababta aad u isticmaali lahayd Google Music badan Spotify? Spotify fiicna bixinta music ku salaysan aad u dhadhan iyo shabakadaha bulshada, qaar ka mid ah oo aad xitaa aan maqlay. Laakiin waa inaad bixiso bil kasta lacag si ay u dhagaystaan ​​music jecel (u baahan rakibi ciyaaryahanka mashiinka kasta). Haddii aad rabto in gurmad aad music online oo ku helaan iyaga oo ku kombiyuutarada iyo qalab badan oo waqti kasta iyo meel kasta, ka dibna Google Music waa doorashadaada, kaas oo gebi ahaanba bilaash ah oo xitaa ay All Access servic, waxaad u baahan tahay inaad bixiso in ka yar marka loo eego Spotify.
Laakiin haddii aad rabto music on Spotify, halkan waa laba xal u Spotify wareejiyo Google Music . Frist waa adigoo isticmaalaya taariikhqorihii maqal ah sida Wondershare cabaya taariikhqorihii Audio inaad kala soo baxdo oo dhan music Spotify ka dibna wareejiyo Google Music iyo maqli ka mid computer iyo qalab aan wax dacwad kasta. Kalena waa ay Portify, kaas oo nuqul aad Spotify playlists in Google Music si toos ah, laakiin ma ogola in aad si aad u hesho actuall MP3 files.
Xalka 1: Download Spotify music iyo soo dejinta in Google Music
Solution 2: TunesGo - Spotify ka dhigi doonaa sida aad isha music shakhsi
Barnaamijka aad u baahan-Wondershare Streaming Audio Recorder
Download music Spotify in MP3 aan khasaaro tayo leh
Ceshano song info u track kasta
Download playlists Spotify aan joogsiga
Jadwalka inaad kala soo baxdo iyo shaandhayso xayeysiis
Sida loo Download Spotify iyo geliyey Google Music
Tallaabada 1 Ku rakib this Spotify music downloader
Download qalab first to your computer iyo xasuuso inaad doorato version saxda ah. Markaasay aad u hesho waxa ay ku rakiban yihiin iyo waxa ay si deg deg ah ku abuurtaan.
Tallaabada 2 Record Spotify Music in Computer
Iyadoo Streaming Audio Recorder, kugu dhuftay rikoorka oo badbaadiyay wax ciyaaro Spotify music in computer. Horyaal Song, farshaxanka album, iyo tags kale music si toos ah updated doonaa sidaas darteed waa habboon in geliyaan si ay Google Music la Music maareeyaha rasmiga ah. Haddii aad isticmaalayso Lugood, sidoo kale si fudud aad ku dari karaysaa music Spotify in Lugood.
Talaabada 3 Upload Spotify in Google Music ka Computer
Marka music Spotify waxaa lagu diiwaangeliyaa si computer, waxaad u baahan tahay Manager Music inay Spotify geliyaan si ay Google Music. Halkan waxaa ku gaarka ah. Skip 2 tallaabooyinka hore haddii aad ku rakibtay Music Google on your computer.
1. Booqo http://music.google.com iyo login aad Google account iyo password.
2. Download iyo rakibi Manager Google Music . Waxayna u shaqaysaa iyadoo labada Windows iyo Mac.
3. baxsad hore, waxaa lagu weydiin doonaa in aad ka Lugood, Windows Media Player, iyo fayl ku computer galaan account Google, iyo geliyaan music. Halkan dooran 'fayl kale', ka dibna 'dar folder' in ay doortaan folder aad ku kaydsan aad diiwaan music Spotify. (Talo: Haddii aad rabto inaad iska baddasho goobta si music ka geliyaan, si ay u tagaan Advanced > Location of ururinta music aan ., oo guji Change)
4. Calan in ay u geliyaan songs in aad ku darto folder ku qeexan mustaqbalka.
5. Hadda aad music Spotify la gelin doonaa in Music Google.
Xalka 2: TunesGo - dhigi Spotify sida il music shakhsi